89 | R Blog..!
Archive for the ‘89’ Category	Ring tones for y’all ;)
အင်တာနက်ကမရ ရုံးကလဲမတက်ရနဲ့ ပျင်းနေလို့ အပျင်းပြေ Ring Tones လေးတွေ လုပ်ပြီးတင်လိုက်တယ်။နာမည်ကြီး သီချင်းတော်တော်များများကနေ Ring လုပ်လို့ ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ဖြတ်ပြီး MP3 Format နဲ့တင်လိုက် ပါတယ်။ Nero Wave Editor ကို သုံးပြီးလုပ်ထားတာပါ။
သတိပြုရန်။ ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Ring Tone တွေကို ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Share လုပ်ချင်လုပ် မကြိုက်လို့ထပ်ပြီး ပြင်ချင်ပြင်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် အခကြေးငွေနဲ့ ရောင်းမစားပါနဲ့။
How to save or download them?
Firefox> Right Click on the link, select “save link as“, choose your desire location, press save.Internet Explorer> Right Click on the link, select “save target as“, choose your desire location, press save.
Cuppy Cake SongDonald Duck Singingဒွေး – အဖြေမရှိမေးခွန်းရသ – ကိစ္စမရှိပါဘူး ၂Please Tell Me Why – Korean SongJustin Timberlake – Sexy Backရဲလေး၊ Rebecca Win – ဆုံးဖြတ်ချက်ရသ၊ Jenny – တစ်ခါတုံးကစိုင်းစိုင်း၊ မို့မို့ – ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းFort Minor – Where’d You Go
89 Specialဒါကတော့ 89 ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ Unreleased Sample Song တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Go Gangsta ဆိုတာကို ဖြတ်ပြီး Ring Tone လုပ်ထားတာပါ။
Warning: Contains Explicit ContentGo Gangsta ChorusGo Gangsta Verse1
Author: Rapster88	Categories: 89, Ring Tones	Tags: RSS feed
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,624 spam comments blocked byAkismet